iCushion: Umqamelo obunjwe njenge-iPhone | IPhone iindaba
iCushion: Umqamelo okumilo we-iPhone
iberllin | | iPhone, Izaziso
I-iPhone ingaphezulu kwefowuni nje ngokuba iyile ngeenxa zonke kuthotho lwezixhobo zokusebenza kwayo kunye nokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa.
Ukongeza, ishishini elipheleleyo lamanqaku liyilelwe, lixelisa ubume kunye noyilo.
Ukusuka iSpazio sibona umqamelo omhle ulingisa ukumila kwe-iPhone, kwebhedi, isofa okanye imoto.
Ukuba kukho umntu onomdla, bangayithenga "Apha" ngexabiso lokutshintshela malunga 17 $.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » iCushion: Umqamelo okumilo we-iPhone
Pueeeeeeee, bendizokuyithenga kodwa akunakwenzeka ukuba ndenze njani! Iyonke iwebhu ikwiTshayina (okanye isiJapan, isiKorea, njl ...) Ke ukuba umntu angandikhokela ...
Ekupheleni kwewebhu, ithi iyafumaneka kwi-ebay
Unokwenza odibeneyo, akunjalo? Sigcina iindleko zokuthumela ngenqanawa ukusuka eKorea ukuya eSpain. Xa sele ulapha kutshiphu ukuyithumela naphina. 🙂
Ndibhalele 2 ukuba uthumela ngokudibeneyo ...
Ngaba ungathetha, akunjalo?
Vumela isindululo: Iindleko zokuhambisa ngenene zisengqiqweni, kwaye into enexabiso elo kufuneka ingabinangxaki ekucoceni amasiko. Iphakheji enkulu, inokuqwalaselwa njengokungenisa elizweni, kwaye iya kuhamba ngeerhafu, lonke ulondolozo nangaphezulu
Kwi-ebay.com ndiyifumene kodwa ixabisa i-30 yeedola ngeendleko ezibandakanyiweyo, ukutshintsha ukuya kwi- € malunga ne- € 25.
Ekugqibeleni ndiyifumene !!!! Ndithenge ezi-2 kwi-ebay…. ipholile nyani !!!!
Umntu othile ovela eBarcelona ofuna uku-odola enye kwaye sabelane ngeendleko zokuhambisa? Ndithumele ilungu lePalamente kwaye siququzelele.
Ndifikile !!!! Ndinayo kwaye kumnandi… .. kuhle kakhulu. Thenga 2 kunye neendleko zokuthumela ngenqanawe ziyafikeleleka kwaye zisengqiqweni….
joooo andiyifumani x ebay tp !! Ndifumana ukuba bayithumela kuphela eCanada okanye e-US, ndiyenza njani !!!? And Kwaye ngaphezulu okanye ngaphantsi kuthatha ixesha elingakanani ukuyithumela?
Ngenye imini ndijonge ezivenkileni eSpain, ndabona ukuba ivenkile sele inayo apha.
Ndifumene imveliso ipholile, kwaye yoqobo.